🥇 ▷ Qaabka madoow wuxuu u gaadhaa Gmail si rasmi ah: sidan ayaa loo shaqeeyaa ✅
Qaabka madoow wuxuu u gaadhaa Gmail si rasmi ah: sidan ayaa loo shaqeeyaa
Sugitaan dheer ka dheer sidii la filayay, Google ayaa ku dhawaaqay in macaamiisheeda boosta ee Android iyo macruufka, Gmail, lagu cusbooneysiiyay habka mugdiga ah ee loogu talagalay dhammaan isticmaaleyaasha. Hadda oo ay iOS 13 iyo Android 10 yihiin kuwo rasmi ah, qaabkan cusub ayaa rasmi ah.
Ilaa hadda, qaar ka mid ah adeegsadayaasha ayaa arkay sida warkan u gaarsiiyay codsiyadooda, laakiin ma aheyn wax ku jiray dhammaan xisaabaadka.
Google maanta xaqiiji in loo soo diro cusboonaysiinta cusboonaysiintaan, in kasta oo ay qaadan karto illaa laba toddobaad in la wada gaadho dhammaan adeegsadayaasha, sababtuna tahay ku-wareejinta dhammaan adeegyadeeda.
Sidee habka mugdiga ah ee Gmail looga shaqeeyo
Waxaa jira laba dariiqo oo loogu talagalay interface-ka Gmail si uu u noqdo madow iyo cawlan. Midka ugu horeeya waa kan ugu fudud, kaas oo dhaqaajiya habka mugdiga ah ee nidaamka qalliinka. Gmail-ka ayaa ogaan doona wuxuuna ku soo bandhigi doonaa waxa ku jira codad madoow.
Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inaan rabin inaan ku dhejino muuqaalka oo dhan qaab Habeenki, laakiin kaliya dalabka Gmail. Sidaas darteed, waxaan sameyneynaa waa inaan raacno talaabooyinkaan:
Waxaan fureynaa Gmail.
Waxaan riixnaa liiska dhinaca.
Guji ikhtiyaarka Settings (waa dhamaadka).
Waxaan galnaa Xeerarka Guud.
Waxaan doorana Mowduucyada.
Halkaas waxaan ka dooran karnaa seddex ikhtiyaar: iftiin, mugdi ama isku mid sida interface moobiilka ah.
Sida aad ku arki karto shaashadda, qaab dhismeedka qurxinta ayaa si aad ah u xanaaqsan inkasta oo qaar badani ay aad ugu raaxaystaan ​​markaad wax aqrinayso, wax aan si sax ah ugu qabanayno Gmail wax badan ayaan ka qaban doonnaa, maahan been in macmiil email loo diro.
Xusuusnow in tani ay sidoo kale beddeli doonto midabka aaladda widget-ka Gmail-ka ee aan ku leenahay miiskeenna, sida aad ku arki karto muuqaalka soo socda.
Haddii cusboonaysiinta aan weli la helin, samir, oo xaqiiji inaad cusboonaysiinta dalabka ku sameysay Google Play Store.